မိကြောင်းကိုဖြစ်ကောင်းသတိထားမိတယ်နောက်ဆုံးနှစ်အနည်းငယ်၊အစျေးကွက်များလိင်များအတွက်အွန်လိုင်းဂိမ်းကစားမိစေခဲ့သည်။ အဘယ်သူမျှမအစဉ်အဆက်ကယ့်ကိုယူရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အ punt အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်း၊အရာဆိုလိုသည်မှာအများကြီးရုန်းကန်နှင့်နာကျင်မှုဖြစ်သင်ရှာအရည်အသွေးကောင်းဘို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခေါင်းစဉ်အဘယျသို့လူတိုင်းသည်လို။ ကျေးဇူးတင်စရာ၊ဒီမှာကျွန်တော်ကဒီနေ့အကြောင်းပြောဖို့ငါ့ကိုယ်ပိုင်စီမံကိန်း:အွန်လိုင်းညစ်ညမ်း။ တူအားလုံး-ကြယ်ပွင့်သွန်းမှု၏လယ်ပြင်တွင်ကျွမ်းကျင်သူများ၏ဂုဏ်ဂိမ်းထုတ်လုပ်၊ငါသည်စုဝေးကျွန်းစုဆှဂိမ်းများဖြစ်ကြောင်းသေချာသင့်ရဲ့စိတ်ကိုမှုတ်(နှင့်သင်၏ဝန်)။, ကျနော်တို့အလွန်အမင်းမာနထောင်လွှားကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုနှင့်ထင်တာပေါ့ခံစားရရန်အလားတူအခါသက်သေအရှည်ကျနော်တို့သွားဖို့ပေးနိုင်ရန်အတွက်ကမ္ဘာ့လူတန်းစားစုဆောင်း၏ဂိမ်းများဖြစ်ကြောင်းသေချာကယ်နှုတ်ဖို့အတွေ့အကြုံဖူးခဲ့ဘူး။ မေ့တက်ကုန်တင်လိဂ်၏ဒဏ္ဍာရီသို့မဟုတ် Cyberpunk ၂၀၇၇:အဘယ်ကြောင့်မလာသာရမယ့်အရာတစ်ခုခုကိုသွားဖို့ကူညီ jizz? ပထမဦးဆုံး-အချိန်အားဖြင့်ဂိမ်းကစားသူတွေကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းနားလည်သဘောပေါက်အမျိုးအစား၊ကျွန်တော်တို့ဖြင့်သင်တို့ကိုပေးသွားဖို့အကောင်းဆုံး၏အကောင်းဆုံးနှင့်အမှတ်မအချဲ့။, ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်အားလုံးသင်ယူစေသည်ဘာကိုခန့်ကျွန်တော်တို့ကိုထံမှကွဲပြားခြားနားဒါခေါ်'ယှဉ်ပြိုင်မှု'။
ကျွန်တော်တို့အမြင်အာရုံသတ္တဝါ–ကြွလာအခါအထူးသဖြင့်ပျော်မွေ့ဖို့အရွယ်ရောက်ဖျြော။ ဖို့တာပေါ့လျှင်သင်ဖြုန်း၏ကြီးမားတဲ့မျိူးငွေသားအပေါ်တစ်ဦးဂရပ်ဖစ်ကဒ်၊သင်အဖြစ်ကောင်းစွာသေချာအောင်ကြောင့်ခံရမယ့်အပြည့်အဝဆာင္မႈ၊မှန်သော? အဘယ်မှာရှိကြောင်းဖွင့်အသင်းမှာအွန်လိုင်းညမ်းကစားပြိုင်ပွဲအတွက်လာ:ကျနော်တို့ဒီဇိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းအတွက်မျိုးဆက်သစ်စက်တွေမှာနိုင်ကိုင်တွယ်ရန်အလွန်ကြီးစွာသောဂရပ်ဖစ်နှင့်အသင်မျှော်လင့်မှခေတ်သစ် AAA ခေါင်းစဉ်။, အချို့မြင်သောတစ်ဦးအဖြစ်လောင်းကစား၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကြိုးစားနေသည့်အယူခံအမျိုးအစားထွက်ရှိစလေိုကွောငျးအပိုအဘယ်သူမျှမကုန်ကျစရိတ်နှင့်အပ်တဲ့အပူ၊အရည်အသွေးမြင့်မားအစု၏ဂိမ်းများကိုအကြောင်းကြာ၊မိမိတို့အလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံအွန်လိုင်းအဖို့လာမယ့်အဆင့်အထိ။ မသွားဘူးကြောင်းစဉ်းစားမည်မဟုတ်နိုင်ကိုင်တွယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏များ၊သို့သော်။ ရိုးရှင်းသောအကြောင်းပြချက်အဘို့ဤအစဉ်အားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့၏အဖြစ်အားကစားပြိုင်ပွဲ graphically တောင်းဆိုမှုများအကြိမ်မှာ၊ကျွန်တော်တစ်ဦးတက်ကြွပုံဖော်စနစ်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုဖယ်ရှားဖို့နောက်ခံဒြပ်စင်မယ့်တဲ့အခါသူတို့လိုအပ်သည်။ ဤရလဒ်များကိုအတွက်မည်သည့်စက်ခံရနိုင်ကစားရန်ခေါင်းစဉ်ရှိသည်။, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချက်အလက်အကြောင်းအကြံပြုသာ ၁၉%စက်ကွုံတှေ့မဆိုတံစဉ်များကိုနှင့်မဆို၊ဒါကြောင့်အများစုဟာစက်တွေလုံးဝဒဏ်ငွေအပြေးဂိမ်းကျနော်တို့မှာသူတို့ရဲ့အပြည့်အဝအလားအလာ။ ငါ့ကိုယုံကြည်သောအခါငါပြောသောဂရပ်ဖစ်အတွင်းအွန်လိုင်းညမ်းဂိမ်းအမှန်တကယ်ဖြစ်ကြောင်းလာမည့်အဆင့်:သင်တွေ့မည်မဟုတ်ဘာမှမနဲ့တူအဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ဖူးဘယ်နေရာမှာမဆိုအင်တာနက်ပေါ်မှာ။ အကောင်းဆုံးဒီဇိုင်နာ၊ဂရပ်ဖစ်အနုပညာရှင်များနှင့် ၃D စွယ်စုံကျမ်းမှာပဲတယ်ဘုတ်အဖွဲ့တွင်စောသောကြောင့်၊သူတို့မှာတူညီသောရည်မှန်းချက်ခဲ့–အမွှေး!
ထိုအချိန်ကအရေးအသား၏ဤအအွန်လိုင်းညမ်းဂိမ်းများရှိပါတယ်၊တစ်ဦးစာကြည့်တိုက် ၁၂ ဂိမ်းများဆော့ကစားနိုင်ပါတယ်၊အားလုံးအရာ၏၁၀၀%သီးသန့်နှင့်ခဲ့ပါသည္လုံးဝသာ-လံုးခ်င္းအိမ္။ ရှည်လျားပြီးရေတိုကြောင်းချင်လျှင်သင်အသစ်တစ်ခုစာကြည့်တိုက်၏smutty ခေါင်းစဉ်၊သူတို့အားလုံးဟာအတွင်းပိုင်းသင်တို့အဘို့အထဲကစစ်ဆေး! ကျွန်တော်လည်းလိုချင်သောသေချာစေရန်မည်သို့ပင်သင့်ရဲ့ဂိမ်းကစားဦးစားပေးရှိလိမ့်မည်ကြောင်းအရာတစ်ခုခုသင်အမှန်တကယ်ပျော်မွေ့နဲ့ပျော်စရာရှိသည်နှင့်အတူ။ အွန်လိုင်းညမ်းဂိမ်းများအလုပ်လုပ်ခဲ့သိရသည်ရပ်တန့်ပေးရန်အတိအကျသင်သည်ဤကျနော်တို့ယုံကြည်စိတ်ချနေမယ်မျှော်လင့်ကြောင်းအသစ်၏ခေါင်းစဉ်ကနေကျွန်ုပ်တို့ယိုခံရဖို့သွားနေကြပါတယ်။, ကျနော်တို့ရရှိပါသည် ၃D ရိုက်ကူးခေါင်းစဉ်၊ချိန်းတွေ့ simulators၊RPGs ပို–ပတ်လည်ကြည့်ယူနိုင်ပြီးမကြာမီတွေ့မြင်သောအဆင့်များကိုယူရအမျိုးမျိုး! အိုး၊ငါတို့သည်လည်းသင်တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ဖို့မိုလ်နှင့်မှန်မှန်မေးများအတွက်အကူအညီအတွက်ကားမောင်းခြင်း၏ဦးတည်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်း။ အသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအားကကျွန်တော်တို့အကြောင်းအရာကိုလူများချင်၊ပိုကောင်း! ကျွန်တော်တို့ဟာမြင့်မားတဲ့လက်မောင်းနှင်လွန်း၊ဒါကြောင့်ကိုယ့်အားကစားအွန်လိုင်းညမ်းဂိမ်းများ၊ေလ့လာရာကိုချစ်ပြီးတော့လိုက်လျောညီထွေငါတို့၏စီမံကိန်းများကိုအညီ။ တော်တော်လေးအပြစ်တင်ဖွယ်ချိုမြိန်၊မှန်သော? ကျနော်တို့ကဲ့သို့သောအထင်တော့အနည်းဆုံး!
မလိုက်မသွားပါနဲ့အတွေးအခိုက်အဘို့မယ့်ကိုဒေါင်းလုတ်ရန်ရှိတယ်ဘာမှမသင်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုလေ့လာစူးစမ်းဖို့အွန်လိုင်းညမ်းဂိမ္း:ဤခေါင်းစဉ်နိုင်ခံစားဖြောင့်မှမည်သည့်ခေတ်သစ်။ ကျနော်တို့လက်ရှိတွင်အပံ့ရှု၊မြေခွေး၊အစွန်း၊သင်မူကား၊ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဓိကဆိုရာက္ဇာကြောင်းသိရသည်ဖာခဲ့သည့်အတွက် ၁၈ လအတွင်းပျော်မွေ့နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ဒီစသက်ဆိုင်မိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့်တက်ဘလက်–သကဲ့သို့ရှည်လျားသင်တဦးတည်းမှဝင်ရောက်ခွင့်များ၏အလေးထက္ဘြတ္၊သင်သွားဖို့လက်လှမ်းရှိသည်ဖို့အွန်လိုင်းညစ်ညမ်း။, ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းဂိမ်းလည်းညှိရန်အတိမ်အနက်အဓိပ္ပာယ်၊သင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ချောမွေ့စွာခုတ်နှင့်အပြောင်းအလဲများအကြားအဆိုပါဖုန်းပေါ်မှာဆိုရင်မပါဘဲပြေးသို့မည်သည့်အရေးကိစ္စများ။ ဒီဘက်ပါ၊ကျနော်တို့ကသေချာစေနိုင်သင်ဆုံးရှုံးဘယ်တော့မှတိုးတက်မှုများအားလုံး၏အောင်မြင်မှုများရှိနေကြတဲ့အခါသွားကြားသင့်ကွန်ပျူတာနှင့်မိုဘိုင်း။ ရုံသေချာအောင်သင်နာက္လည္းဘာတူညီသောအကောင့်နှင့်အင်း–အဘယ်သူမျှမကိစ္စရပ်များကိုသမျှ!
နှင့်အတူ ၄ ဂိမ်းက်င္ပါတဲ့ beta ကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုအဆင့်နှင့်အစီအစဉ်များအတွက် ၃ ရန်၊ကျနော်တို့အကြောင်းစဉ်းစား၏အနာဂတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန်းကတော်တော်လေးအပြစ်တင်ဖွယ်ချိုမြိန်။ ဒါဟာအချိန်ကြာမြင့်စွာကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်ရရန်အဘို့အသက်သာအချိန်ဇယားနှင့်အတူ၊ဒါပေမယ့်ကျေးဇူးတင်စကားမှအဆက်မပြတ်ပံ့ပိုးမှုများမှပရိသတ်များနှင့်ပုံမှန်စစ်တမ်းများ၊ကျနော်တို့အထဲကအလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးအဘယျသို့လူတွေကိုချစ်ပြီးတော့သွားပြီ။ ပါကကျွန်ုပ်တို့၏ခေါင်းစဉ်များမှာယေဘုယျအားဖြင့်အတော်လေးရှည်ရှည်၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အနည်းငယ်အတွေးအခေါ်များအတွက်တိုတောင်းဖြန့်ချိသောကျွန်တော်တို့အတွက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေလာမည့်လ။, ဤအဖြစ်သွားကြသည်ထိပ္ခ်ြန္ခ်ြန္ပဲင္ႏနှင့်လျင်မြန်စွာညစ်ညမ်းသောအကျိုးကိုသင်အလျင်အမြန်–ပြီးပြည့်စုံသောသူတို့အဘို့ရှိသည်သောအချိန်ကန့်သတ်ဖို့သူတို့ရဲ့အဖြေနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းအစည်းအဝေးများ။ ဒါဟာနေဆဲလုံးဝအတည်ပြု၊ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ဆာဗာ၊တရားဝင်ဖိုရမ်၊တစ်ပြွန်ခရီး(အခမဲ့လိင်ဗီဒီယို)နှင့်လွှဲပြောင်းဆုလာဘ်အစီအစဉ်ပေးသည်သောကြီးလော့နှင့်အခြားအကျိုးခံစားခွင့်ရသည့်အခါလူများကကစား။
ဒါကြောင့်၊သင်သည်အဘယ်သို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေ? ယခုမှာထမှတ်ပုံတင်ပြီးရယူဖို့အကောင်းဆုံးအခမဲ့ညစ်ညမ်းဂိမ္းခရီး။ ဤသည်သာအချာသင်လိုအပ်မှစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပေါ်ယခုမှစ။–အရတွင်းနှင့်မြင်ရအဘယ်ကြောင့်!